DH-3ND1WS Electronic Home Shower - Panasonic
ရေအပူပေးစက် (ပန်းထွက်ခြင်းမရှိသော ရေပံ့) DH-3ND1WS
ပန်းထွက်ခြင်းမရှိသော ရေပံ့ N စီးရီး အိမ်သုံး ရေပန်း (ရေအပူပေးစက်)
N စီးရီးတွင် တန်ဖိုးကြီးပြီး တောက်ပြောင်ကြော့ရှင်းသော ဒီဇိုင်းရှိသည်။ ၎င်းက ရေချိုးခန်းနေရာနှင့် လိုက်ဖက်သော စတိုင်ကျလှပသည့် သွင်ပြင်ဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်နိုင်သော ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ကြီးမားသော LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပူချိန် သတ်မှတ်နိုင်သော အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် ရေအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ Magic Health လုပ်ဆောင်ချက်က ရေချိုးရာတွင် ပို၍သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ကို အပန်းပြေစေသည်။
- ကြီးမားသော LCD ပြသချက် မျက်နှာပြင် - LCD ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် အပူချိန် ထိန်းချုပ်စနစ်
- Magic Health- e-CYCLE၊ e-HYBRID
ကြီးမားသော LCD ပြသချက် မျက်နှာပြင်
NDP1/ND1 တွင် စတိုင်ကျလှပပြီး အလွယ်တကူမြင်နိုင်သော LCD မျက်နှာပြင်ကို ၎င်း၏ပင်မ စက်ယူနစ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအဆင်ပြေစေသော ပြသချက် မျက်နှာပြင်က သတ်မှတ်ထားသော ရေပန်း အပူချိန်၊ ရေပန်း မုဒ်နှင့် အချိန်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် မြင်နိုင်အောင် ပြသပေးသည်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ရေပန်းအပူချိန်ကိုလည်း ချိန်ညှိနိုင်သလို မုဒ်ကိုလည်း ပြောင်းနိုင်သည်။
မပြောင်းလဲသည့် အပူချိန်ကြောင့် စိတ်သက်သာယာရမှု
စက်တွင်းတပ်ဆင်ပါရှိသော အပူချိန် ဆင်ဆာ
စက်ကိုယ်ထည်တွင် အပူချိန် ဆင်ဆာကို တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ဖြန်းလိုက်သည့်ရေ၏ အပူချိန်ကို တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်နေစေသည်။ သင် ရေချိုးနေစဉ် အပူချိန် ပြောင်းသွားမည်ကို မစိုးရိမ်ရတော့သည့်အတွက် စိတ်အေးလက်အေး ရေချိုးနိုင်သည်။
ရေဖြန်းပုံစံကို အလွယ်တကူ ပြောင်းနိုင်ခြင်း
ရေဖြန်းပုံစံ3ခု ရွေးချယ်နိုင်စွမ်း
လွယ်ကူ ဘေးကင်းစွာ နှိပ်နိုင်ခြင်း
တစ်ချက်နှိပ် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်
စက်ကိုယ်ထည်တွင် တစ်ချက်နှိပ် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်ကြီးတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ခလုတ်က ကြီးမားသဖြင့် ရေချိုးရင်း မျက်စိပိတ်ထားလျက်ဖြင့်ပင် နှိပ်နိုင်သည်။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ရေရော၊ မီးရော ပိတ်သွားသည်။ ၎င်းသည် ရေကို ပို၍ မြန်ဆန်၊ အဆင်ပြေစွာ ပိတ်နိုင်သည့် နည်းဖြစ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ခြင်း
Magic Health သည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ကို ကျန်းမာစေရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ e-CYCLE နည်းပညာဖြင့် ၎င်း၏ ရေပူ 40 စက္ကန့်နှင့် ရေအေး 30 စက္ကန့် တစ်လှည့်စီ ဆက်တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းက လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကို 43% လျှော့ချပေးသည်။ e-HYBRID သည်လည်း ရေသုံးစွဲမှုကို 20% ထိ လျှော့ချပေးပြီး eco e-HYBRID နည်းပညာက လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး စွမ်းအင်ချွေတာပေးသည်။ Magic Health ကြောင့် မီတာခ သို့မဟုတ် ရေသုံးစွဲမှုကို စိတ်ပူနေစရာမလိုဘဲ သင့်ကို လန်းဆန်းသွားစေသည်။
e-CYCLE ရေပန်းဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လိုက်သည့်အခါ အပူပြန်မှုများကို ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို ဆက်တိုက်စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့် သင် ရေပန်းဖြင့် ရေချိုးပြီးနောက် 15 မိနစ်ကြာသွားပြီးလျှင်ပင် နဂိုအတိုင်း နွေးထွေးမှုကို ခံစားရစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို နေထိုင်ကောင်းစေကာ အလုံးစုံ သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
Ag+ Crystal-ဘက်တီးရီးယား ကာကွယ်ပေးသော ရေပန်းခေါင်း
Ag+ (ငွေသတ္တု) ပါဝင်သည့် ဘက်တီရီးယား ကာကွယ်ပေးသောပစ္စည်းက မှိုပေါက်ဖွားမှုကို ဟန့်တားပေးသည်။ ရေချိုးခန်း၏ စိုထိုင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ရေပန်းခေါင်းတွင် မှိုများပေါက်ဖွားမှုကို ဟန့်တားပေးသည့်အတွက် ရေပန်းခေါင်းကို အစဉ်သန့်ရှင်းနေစေသည်။
ဘေးကင်းရေး အချက်9ချက်
1. လျှပ်ကာပေးသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
- အန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို လက်ချောင်းဖြင့် ထိုးမကြည့်နိုင်ရန်၊ ပြင်ပပစ္စည်းများ မဝင်နိုင်ရန် တားဆီးပေးသော အပိတ်ဖြင့် ကာကွယ်ပေးရန်အတွက် IEC 60529 ကို လိုက်နာထားသည်
- ဓာတ်မလိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်
2. ရေစဉ်မှု ကာကွယ်ပေးသော ကိုယ်ထည်အိမ်အဖုံး
- ကာကွယ်မှုအတွက် IEC 60529 (IP25) ကို လိုက်နာထားသည်
- ရှေ့ဘက် မျက်နှာပြင်နှင့် နောက်ဘက် မျက်နှာပြင်ကြား အဆက်သည် ရေစိုခံဒီဇိုင်းဖြစ်သည်
- မီးလောင်ခြင်း / ဓာတ်လိုက်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်
3. မီးလောင်မလွယ်သော ပစ္စည်းကို စည်းကမ်းနှင့်အညီ အသုံးပြုထားမှု
- UL-94-V0 အမျိုးအစား ပစ္စည်း
- ပြင်ပ ကိုယ်ထည်အိမ် (ရှေ့ဘက် မျက်နှာပြင်/နောက်ဘက် မျက်နှာပြင်) အတွက် အလိုအလျောက် မီးငြှိမ်းသတ်ပေးပြီး မီးလောင်မလွယ်သော ပစ္စည်းကို သုံးထားသည်
- မီးမလောင်အောင် ကာကွယ်ပေးသည
4. တစ်ချက်နှိပ် ဖွင့်/ပိတ်ခလုတ် / ပင်မခလုတ် ဖွင့်/ပိတ်
- ပင်မ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ရေပို့လွှတ်သည့်လိုင်းနှစ်ခုလုံးကို တိုက်ရိုက်ပိတ်ပေးသည်
- အပူလောင်ခြင်းနှင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်
5. အပူထိန်းညှိကိရိယာကို ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်သတ်မှတ်မှု
- အစိတ်အပိုင်း ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ဆက်တိုက် အပူပေးနေလျှင် ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပေးသည်
- မီးမလောင်အောင် တားဆီးပေးသည
6. ကြာရှည်ခံ ကြေးနီ အပူပေးစက် ယူနစ်•1 / အားဖြည့်ပိုလီယာမိုက် အပူပေးစက် ယူနစ်•2
- ဘူးအတွက် အလိုအလျောက် မီးငြှိမ်းသတ်ပြီး မီးလောင်မလွယ်သော ပစ္စည်းသုံးထားသည
- မီးမလောင်အောင် တားဆီးပေးသည်
7. အော်တို အပူဖြတ်တောက်မှု (55°C)
- ရေအပူချိန်က အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်သွားလျှင် ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပေးသည်
- အပူလောင်မှုများ (ပထမအဆင့် အပူလောင်မှု) ကို တားဆီးပေးသည်
8. စက်တွင်းပါ မြေစိုက်ကြိုး လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှု ဖြတ်တောက်ကိရိယာ(ELB)
- စက်ဖြင့်လည်ပတ်သော အမျိုးအစား၊ ဆားကစ်နှစ်ခု ထိန်းချုပ်ပေးသော ခလုတ
- လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက အအေးကြိုးနှင့် အပူကြိုး နှစ်ခုလုံးကို လုံးဝ ဖြတ်တောက်ပေးသဖြင့် နှစ်ဆ ဘေးကင်းစိတ်ချရသည်
- စက်တွင် လက်ရှိ ယိုစိမ့်မှုရှိနေပါက ဓာတ်အားကို အလိုအလျောက် ဖြတ်တောက်ပေးသည်
9. ရေစီးဆင်းမှု အာရုံခံဆင်ဆာ
- ရေစီးဆင်းမှုအား နည်းလွန်းခြင်းကြောင့် ရေအပူချိန် လွန်ကဲလာခြင်းမဖြစ်အောင် ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပေးသည်
- အပူလွန်ကဲခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်
380 x 200 x 89 (H x W x D) (mm)
Water Heater (Non-Jet Pump) DH-3ND1WS